अभिनेत्री गौरी मल्लको प्रधानमन्त्री ओलीलाई आयो यस्तो पत्र : आगोमा होमिन लागेका जनतालाई रोक्नुहोस्
मंगलबार फेसबुकमा पत्र लेख्दै अभिनेत्री मल्लले प्रश्न गरेकी छन्, ‘हिजो भारतबाट कोरोना नेपाल आएको भन्ने मुखले आज आफ्ना नागरिकहरूलाई ‘ए मेरा प्यारा नेपाली नागरिकहरू, भारतमा कोरोनाको प्रकोप बढ्दो छ, जे गर्नपर्छ हामी गर्छौं भनेर किन भन्न सकिरहेको छैन ?’
लकडाउनको सुरुवातसँगै भारतबाट नेपाल भित्रिने नगरिकलाई कैयौं दिन बोर्डरमा बिचल्ली बनाएर राखियो । कैयन् नेपाली त लुकीलुकी हिँडेरै भए पनि घरमै पुगेर मर्छौं भनेर हिँडे ।
कत्तिले धेरै ढिला आफ्नो घर परिवारको मुख हेर्न पाए । त्यस समय यतिसम्म भनियो, ‘नेपालमा भित्रेका कोरोनाको संक्रमण सबै भारतबाटै आएको हो ।’ सत्तामा टिक्न जे पनि बोल्न सकिन्छ…
आज उनै नागरिक आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर भारततर्फ जाँदै छन् । यतिबेला चाहिँ ती मधुर वाक्य कता हराए ? अरूलाई एउटा औंला देखाउँदा आफूतिर अन्य ३ औंला फर्किरहेका हुन्छन् भन्ने उखान यहाँ आएर चरितार्थ भएन र ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू १ यहाँलाई आफूले बेला कुबेला बोल्नुभएका वक्तव्य ट्रोल भइराख्दा रमाइलो गर्ने माध्यम भइरहेको होला अथवा बानी पनि परिसकेको होला । तर हामी सर्वसाधारणलाई साह्रै लज्जाबोध हुन्छ ।
किनकि हाम्रो मान्यता– जसलाई हामीले अत्यन्त विश्वास गरी देशकै शीर्षस्थानमा राखेका छौं, त्यो व्यक्तित्व हाँसोको हैन, गर्वको पात्र बनोस् । बिडम्बना ! त्यस्तो दिन कमसे कम हाम्रो जीवनमा आउन सकेको छैन ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू १ पहिला आफ्नो देश र जनताको अवस्था सुधार्नुपर्यो । सानातिना जस्तो हुन्छ, रोजगार दिनतर्फ लाग्नुपर्यो । यो देश नै तपाईंको घर हो ।
हामी जनता नै तपाईंका परिवार हौं । यो कुरालाई आत्मसात् गर्नुहोस् । आफ्नो परिवार छाडेर पलायन हुने रहर कसैलाई हुँदैन । तर आज तपाईंका जनता जानीजानी आगोमा होमिन जाँदै छन्, उनीहरूको जीवनको रक्षा गर्ने कर्तव्य पनि तपाईंकै हो ।
Prevपेट दुखेर अस्पताल जचाउँन पुगेका एक पुरुषको गर्भवती भएको रेपोर्ट आएपछि…
Next“अब अर्को महामारी खप्न तयार रहनुहोस”: डब्ल्यु एच ओ